DEG-DEG: Madaxweyne baxsad ah oo dhalashadii laga laabtay. Waa kee madaxweynahaas. – Puntland News
Home 2017 September 11 Somali News DEG-DEG: Madaxweyne baxsad ah oo dhalashadii laga laabtay. Waa kee madaxweynahaas.
DEG-DEG: Madaxweyne baxsad ah oo dhalashadii laga laabtay. Waa kee madaxweynahaas.
DEG-DEG: Madaxweyne baxsad ah oo dhalashadii laga laabtay. Waa kee madaxweynahaas.Madaxweynihii hore ee dalka Georgia, Mikheil Saakashvili, ayaa ku guulaystay inuu ka tallaabo soohdinta ay Poland la wadaagto wadanka Ukraine, oo sanadihii dambe saldhig u ahaa, balse dhawaan kala laabatay dhalasho uu siiyay.
Ka dib waxa uu samaystay xisbi siyaasadeed oo yar. Dhanka kale dowladda Georgia ayaa doonaysa in loo soo gacan geliyo Saakashvili oo ay ku eedaysay ku takri fal awoodeed iyo musuq maasuq, eedaymahaasi oo uu beeniyay kuna tilmaamay kuwo ay siyaasadi ka dambeyso.